Umnyango wezeMpilo esifundeni saseBryansk ungenye yehulumeni obaluleke kakhulu esifundeni. Kusukela emsebenzini wakhe kuncike izinga lokunakekelwa kwezokwelapha, ukuhlelwa kwezibhedlela kanye nempilo yeBryans. Ukwaziswa okuningiliziwe mayelana nomnyango wezempilo wesifunda saseBryansk kuhlinzekwe kule ngqungquthela.
UMnyango wezeMpilo esifundeni saseBryansk uyinhlangano yokuphatha ngaphansi kokuphathwa kwesifunda. Imisebenzi yayo ihlanganisa ukwakheka nokusetshenziswa kwenqubomgomo yezempilo kahulumeni ngokugcwele. Futhi, isiqondiso esibophekile somsebenzi womnyango ukuqinisekisa isimo esihle sokuhlanzeka nesimo se-epidemiological esifundeni. Ngesikhathi esifanayo, uMnyango wezeMpilo esifundeni saseBryansk unesibopho sokuthuthukisa izinhlelo ezidingekayo kule ndawo, ukuxhumanisa nokulawula umsebenzi wezinhlaka eziphezulu, ukulungiselela uhlelo lokugqugquzela emkhakheni wezempilo. Abaphathi abakhulu bomnyango yizo zokuphatha komuzi kanye noMnyango wezeMpilo. Iminyango ilawula amabhizinisi kahulumeni kanye nezikhungo zesifunda saseBryansk, kanye nenethiwekhi yekhemisi yesifunda.
Ikheli loMnyango wezeMpilo esifundeni saseBryansk: iBryansk, i-Osoaviakhima lane, indlu 3, isakhiwo 1. Lesi sakhiwo sezitini esinezintathu. Uma ufika esikhungweni ngokuthutha komphakathi, kuzomele uhambe esitokisini "Taxi Park". Isithombe seMnyango wezeMpilo esifundeni saseBryansk sinikezwe ngezansi. Isikhungo sisebenza kusukela ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu. Kusukela ngoMsombuluko kuya ngoLwesine, usuku lokusebenza luqala ngo-8: 30 futhi luphela ngo-17: 45. NgoLwesihlanu, usuku lokusebenza lufinyeziwe, ngakho abasebenzi baqedela umsebenzi wabo ngo-16: 30. Usuku lokudla oluvela emsebenzini womnyango luqala kusukela ngo-13: 00 kuya ku-14: 00. Inombolo yocingo yomnyango wezempilo wesifunda saseBryansk ingatholakala kwiwebhusayithi esemthethweni. Ucingo kufanele luhambisane namahora asebenzayo enhlangano.
Kusuka kubantu abamelele kunoma iyiphi inhlangano, impumelelo yento yonke incike. Abaholi eMnyangweni wezeMpilo esifundeni saseBryansk bahlukaniswa izinga eliphezulu lobuchwepheshe kanye nothando olungenamkhawulo ngomsebenzi wabo. Iholwa udokotela omncane futhi othembisayo kakhulu - u-Andrei Nikolayevich Bardukov. Umsizi omkhulu u-Andrei Nikolayevich uyisekela lakhe uMosin Vitaliy Valeryevich. Futhi, umqondisi unamaphini amathathu abalulekile afanayo ezindaweni ezithile. U-Chirkova Olga Ivanovna uphendula imibuzo ephathelene nokuvikelwa kobuhle nobuntwana. Ingxenye yomnotho yezikhungo zesabelomali kanye nomshuwalense wempilo obumpoqo uhola u-Olga Aleksandrovna Yakusheva. Inhlangano nokulawula ukuhlinzekwa kwezidakamizwa kwenziwa yiphini likamqondisi uBarhchevskaya Larisa Borisovna.
UBardukov Andrey Nikolaevich
Kusukela ngoJanuwari 2016, u-Andrei Nikolayevich Bardukov ungumqondisi ogcwele uMnyango wezeMpilo esifundeni saseBryansk. Ngalesi sikhathi, wabeka esikhundleni sakhe u-Alexander Maklashov. UBardukov wathola imfundo yezokwelapha e-Ryazan University, ekhethekile ngo "Medicine". Ngemuva kokuqashwa kwe-internship kwaphela ekuhlinzekeni, waqala ukuqhuba imisebenzi ewusizo kulolu hlelo esibhedlela sesine. Lapha wasebenza unyaka, kusukela ngo-1998 kuya ku-1999. Khona-ke wathuthela esikhundleni se-coloproctologist esibhedlela saseBryansk Regional No. 1. Lapha wasebenza kuze kube ngu-2014. U-Andrei Nikolayevich akayena kuphela ochwepheshe abanekhono, kodwa futhi ilungu le-Association of Oncologists, i-Gastroenterologists neColoproctologists yaseRussia. Ngo-2014 wakhethwa esikhundleni sephini esifundeni saseVivgonichsky. Ngaphambi kokuthola ukuqokwa kwakhe njengomqondisi womnyango, wayekhonza njengodokotela oyinhloko yesibonelelo sezemvelo.
Sebenza nezikhalazo zezakhamizi
Ngo-2016, abasebenzi bomnyango bahlola izikhalazo ezibhalwe phansi nezikhulunywe ngomlomo. Futhi, izincomo ezingu-563 ezamukelwe ngokusebenzisa i-hotline zacutshungulwa. Ngokusekelwe emiphumeleni yomsebenzi nezikhalazo zezakhamizi, kwavezwa ukuthi inkinga enkulu yaleso sifundazwe yizinga eliphansi lokunakekelwa kwezokwelapha kokubili abadala kanye nezingane. Futhi, izakhamuzi zesifunda saseBryansk azijabuli ngomsebenzi wabasebenzi bezokwelapha, ukuhlinzekwa kwezidakamizwa, amazinyo kanye nenqubo ende yokwakha iqembu lokukhubazeka. Ungafaka isicelo eMnyangweni wezeMpilo esifundeni saseBryansk ngezindlela eziningana. Okokuqala, ngokubiza umemukeli womqondisi. Ungenza ucingo ku-hotline. Enye indlela ukubhalela incwadi ephepheni noma kwifomu ye-elekthronikhi ku-e-mail esemthethweni noma e-mail yomnyango.
Iwebhusayithi yoMnyango wezeMpilo esifundeni saseBryansk ine-reception electronic ezokusiza ukuthi uxhumane nomnyango.
Yiqiniso, okuphumelela kakhulu kulokhu kungukuxhumana komuntu siqu. Kulokhu, iSekela labaqondisi bomnyango lizokwamukela izakhamizi. Lapho ukwamukela, kufanele ubhalise nobhala kusengaphambili.
Isibonakaliso esihle somsebenzi wenhlangano yimibiko etholwa yizikhungo ezilawulayo. Ngeshwa, izikhalazo emnyangweni wezeMpilo esifundeni saseBryansk ezindaweni zokwelapha zivama kakhulu. Izakhamuzi zesifunda asinelisekile ngomsebenzi we-Starodub Central District Hospital. Ngokusho kwabo, abazange baphulukise umuntu, odokotela balesibhedlela bayabhala. I-polyclinic idolobha №5 iphinde ihlaselwe. Lapha inkinga enkulu ibhalwa ngesikhathi sokwamukela. Le nqubo ivame ukuhluleka futhi ayibonisi ukuthi isiguli siyabhalwa. Kodwa-ke, odokotela abenzi ukwamukela futhi abamukeli abantu abaye baba izisulu ezingenakuzithandela zezimo. Isibhedlela sase-Klintsovskaya sibhekene nokuhleleka kokuhlelwa komsebenzi. Omunye weziguli uthi uchithe cishe ihora ngesikhathi sokuqokwa nomuntu ophthalmologist ekomishini. Ngenxa yalokho, lo mhlengikazi uthe wayengekho ehhovisi. Isiguli saya kwelinye ihhovisi, kodwa udokotela akazange asithathe futhi, ngoba washiya emsebenzini wakhe amahora ambalwa ngaphambi kokuphela kosuku lokusebenza. Udokotela oyinhloko wachaza ukuthi isimo sakhe asimthandi.
Ukuthuthukisa ikhwalithi yenkonzo izakhamizi
Ukuze umnyango ukwazi ukuthi iziphi izikhungo zezokwelapha okufanele zikhokhwe ngokukhethekile, kunesigaba esikhethekile kwiwebhusayithi esemthethweni. Ubizwa ngokuthi "I-polyclinic iqala ngokubhalisa." Lapha, umuntu ngamunye angashiya umbono wakhe futhi abhale ukuthi yini engafanelekile kuye esikhungweni esithile. Ngakho abasebenzi baseMnyango bangathola ulwazi olunokwethenjelwa futhi basheshe baxazulule isimo esingathandeki. Izinhlangano ezifanayo ezothola impendulo enhle zizokwazi ukuncintisana nesihloko se-polyclinic engcono esifundeni.
Tablets karsil - kokuthola incazelo futhi ikakhulukazi